गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमु’क्त भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यससँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमु’क्त बनेका हुन् । उनको पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित भए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे ।
मतदानमा ५७ जनाले भाग लिएका थिए ।
गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विहीबार विश्वासको मत लिएका हुन् । तर, प्राप्त गर्न सकेनन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सो धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा विघ’टन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको June 10, 2021 132 Viewed